Bryan Fuller dia niorina tamin'ny fitarihana adaptation vaovao an'i 'Christine' ho an'i Sony, Blumhouse
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Bryan Fuller dia niorina tamin'ny fitarihana adaptation vaovao an'i 'Christine' ho an'i Sony, Blumhouse
Vaovao Mahafaly Fialam-bolySarimihetsika mahatsiravina
by Waylon Jordan Jona 8, 2021
Bryan Fuller (Hannibal) dia vonona hanoratra sy hitarika fanovana vaovao an'i Stephen King's Marina ho an'ny Sony sy Blumhouse Studios.
Ny tantaran'i King dia mifantoka amin'ny tovolahy iray antsoina hoe Arnie izay lasa variana amin'ny Plymouth Fury 1958 izay novidiny mba hamboarina. Ny fiara dia manana lasa ratsy sy mankamamy rà ary tsy ela dia aoriny amin'ny faniriany ilay tovolahy ary esoriny izay manompa azy ireo na manandrana manasaraka azy ireo.
I John Carpenter dia nanamboatra ny boky teo aloha tamin'ny 1983. Ny fahitan'ny tompom-pandraharana ny tantara dia niaraka tamin'ny isa mpamono ary koa ny feon-kira tsy hay hadinoina momba ny vatolampy 50s / 60s mahazatra.
Araka ny fe-potoana farany, Jason Blum dia hamokatra ilay sarimihetsika eo ambanin'ny sora-baventy Blumhouse miaraka amin'i Vincenzo Natali sy Steven Hoban. Peter Kang dia mamaly an'i Sony Picture amin'ny sarimihetsika.
Fuller dia tonga amin'ilay sanganasa miaraka amina katalaogin'ny asa amin'ny karazana ao anatin'izany ny tianao indrindra amin'ny fahitalavitra-fahitalavitra toa Hannibal ary Manosika ny Daisies ary koa ny asany tamin'ny voalohany – ary maro no miady hevitra amin'ny vanim-potoana tsara indrindra Malagasy Andriamanitra mifototra amin'ny tantara nosoratan'i Neil Gaiman.
Ny fampifanarahana vaovao dia miditra amina filaharana fampifanarahana sarimihetsika momba ny fananan'ny King nandritra ny folo taona lasa niaraka tamin'ny kinova vaovao The Stand ary Firestarter ary koa ny fampifanarahana voalohany ny toetra toy ny The Outsider ary Tantaran'i Lisey, izay samy nahazo fanamarihana tsy mampino.
iHorror dia hitazona anao halefa ao amin'ny kinova Fuller an'ny Marina rehefa lasa misy izy ireo. Ampahafantaro anay ny hevitrao amin'ny hevitra etsy ambany!
Blumhousebryan fullerMarinaJason Blumstephen kingWaylon Jordan
Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 6-8-21
Pat Mills, Alyson Richards dia mitondra antsika ao anaty horohoro / Thriller 'The Retreat'
Browse Cateories Select Category Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (11) AppleTV + (4) Blu Rays (8) Horohoro amin'ny hatsikana (49) Tantara an-tsary (13) Zavatra tsara hividianana (4) Facebook (andiany) (1) Angano (43) Rakitra hita (28) Gore (24) HBO (sarimihetsika) (6) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (58) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,782) Sarimihetsika mahatsiravina (320) Horror Series (83) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (5) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (38) Resadresaka nifanaovana (andiany) (4) Horohoro LGBTQ (42) Lisitry (sarimihetsika) (38) Lisitry (andiany) (2) Tsena (19) Monster Horror (9) Hevitra momba ny sarimihetsika (55) Sarimihetsika (14) Mozika (36) Netflix (sarimihetsika) (29) Netflix (andiany) (32) Tsy angano (4) Paranormal (75) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (52) Famerenana andian-dahatsoratra (9) Shudder (sarimihetsika) (46) Shudder (andiany) (15) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (36) Sarimihetsika mivantana (79) Streaming Series (37) Kilalao (2) Tranofiara (sarimihetsika) (236) Tranofiara (andiany) (45) Heloka tena izy (46) Lalao video (181) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (12)
Ny ekipan'ny VFX dia namono an'i James Bond tamin'ny fomba hafa ...
Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 7-27-21
'Mpitaingina Fahafatesana ao an-tranon'ny Vampira' i Danzig ...
Corey Feldman dia manana hevitra lehibe ho an'ny ...
Ilay tranofiara 'Zanak'ondry' dia mitondra antsika anaty haizina, ...